Sidee loogu ilaaliyaa sawiradayda xuquuqda lahaanshaha? (I) | Abuurista khadka tooska ah
Sawir laga soo qaaday Freepik.com
Internetku wuxuu kuu noqon karaa kanaalkaaga ugu wanaagsan ee aad adduunka ugu soo bandhigi karto sawirradaada iyo dabcan si aad u hesho dhagaystayaasha aad bartilmaameedsato. Laakiin, Sidee amaan u yahay in la isticmaalo bada dhijitaalka ah si loo muujiyo shaqadeena? Sideen uga ilaalin karnaa shaqooyinkeena tuugada iyo si xun u adeegsiga?
Waa inaad ogaataa in sawirradu, sida shaqo kasta oo farshaxanimo ah, ay ilaalinayaan xuquuqda lahaanshaha iyo xuquuqda lahaanshaha aqooneed, sidoo kale waddan kasta wuxuu leeyahay sharci u gaar ah oo arrintan la xiriira.
1 Xuquuqdee ayuu leeyahay sawir qaade?
1.1 Noocyada xuquuqda
1.2 Xuquuqda dhiig-miirashada:
Xuquuqdee ayuu leeyahay sawir qaade?
Nidaamka sharciga iyo sharci dejinta aad ayey u kala duwan tahay iyadoo kuxiran wadankaSidaa darteed, waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad raadsato macluumaad ku saabsan mawduucan. Waa kuwan dukumiintiyo waxtar badan kuu yeelan kara adiga oo ka imanaya meelaha juqraafiyeed ee ku hadla Isbaanishka:
Sharciga hantida aqooneed ee Isbaanishka
Argentina: Nidaamka sharciga ah ee hantida aqooneed
Chile: Sharciga Hantida Maskaxda
Kolombiya: Xuquuqda daabacaadda
Mareykanka: Sharciga Xuquuqda Qoraalka
Mexico: Sharciga Xuquuqda Qoraalka ee Federaalka
Waqtiga saxda ah ee aad riixdo batoonka-sii-deynta, biloowga ayaa ku qulqulaya masraxa adiguna waad sii deyneysaa xarkaha, xuquuqo taxane ah ayaa kugu dhacaya, iyo waa lagaa ilaaliyaa by sharciga hantida aqooneed iyo xuquuqda daabacaadda.
Dhinac waxaad isla markiiba leedahay taxane ah xuquuqda anshaxaKuwani waxay kaa ilaalinayaan qoraa ahaan loomana wareejin karo lamana iibin karo dhinac saddexaad. Xuquuqdaas marwalba adigaa iska leh (weligeedba) oo ma awoodi doontid inaad ka go'do iyaga. Go'aaminta sida shuqulladaada loo qaybin doono oo looga noqon doono haddii khilaaf yimaado (magdhaw qofka ay khusayso), dalbashada in qoraaga shaqooyinkaaga la aqoonsado iyadoo laga fogaanayo wadar ahaan iyo qayb xatooyo qayb ka mid ah waa xuquuqda anshaxa ee kaa ilaalinaysa dhinacyada saddexaad.
Dhinaca kale waxaad leedahay waxa loogu yeero xuquuqda isticmaalka (ama dhaqaale ahaan) kuwanna waxaa loo wareejin karaa dhinacyada saddexaad waana la sii qori karaa. Waxaad fursad u leedahay inaad ku tabarucdo ama aad amaahiso adigoo ku beddelaya qaddar dhaqaale ama heshiis laba geesood ah. Kuwani ma waarayaan waxayna soconayaan illaa 70 sano geeridaada ka dib (Yurub gudaheeda), marka waqtigan la dhaafo, xuquuqdaasi waxay u gudbi doontaa qaybta dadweynaha waxayna ka tirsanaan doontaa sooyaalka taariikheed ama qaran.
Adiga oo kaliya, sida qoraaga, ayaa ah qofka kaliya ee leh awooda iyo suurtogalnimada in looga faa'iideysto dhaqaalaha ama isticmaalka xuquuqda sawiradaada. Ama koontadooda ama heshiis lala galo dhinac saddexaad (ha ahaato mid dhaqaale ama mid aan ahayn). Xuquuqdaasi waa sida soo socota:
Taranka: Waxay ku saabsan tahay awoodda dib-u-soo-saaridda sawirradaada wax kasta oo ay adeegsadaan (buugaag, joornaallo, fiidiyowyo, kaararka boostada, iwm.).
Qaybinta: Waxay loola jeedaa xuquuqda aad u leedahay inaad iibiso sawirradaada laakiin xuquuqdan lama gudbinayo, markaa haddii aad ka iibiso sawirradaada dhinac saddexaad, dib uma iibin karaan maadaama ay xuquuqdani tahay mid aad adigu iska leedahay.
Publicidad: Waxaa loola jeedaa suurtogalnimada inaad u adeegsato sawirradaada ololeyaal xayeysiis ah adiga oo oggolaansho haysta (iyadoo loo marayo heshiis dhaqaale ama mid kale).
Isbadal: Haddii aad xaquuqdan siiso, waxaad u oggolaan doontaa in sawirradaada wax laga beddelo iyagoo abuuraya shaqo ka duwan tii hore, (dib u soo celinta sawir qaadista, dib u habeynta, dib u soo celinta ...)
Sidaad arki karto, tani waa a nidaamka shatiga. Mar kasta oo aad u qoondeeysid mid ama in ka badan oo xuquuq ah, waxaad siineysaa rukhsad dhinacyo saddexaad si ay uga faa'iideystaan ​​shaqooyinkaaga, runtiina waa sidaas inta badan bogagga internetka ee loogu talagalay ganacsiga sawirrada sawirrada. Anaga qorayaal ahaan waxaan u xilsaaray xuquuq iyo waxay suuq geynayaan shaqadeena, na siinaya iib kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Sidee loogu ilaaliyaa sawiradayda xuquuqda lahaanshaha? (I)